Wasiir Sadiq Warfa oo Paris uga qeybgalay shir weynaha mustaqbalka shaqada - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Wasiir Sadiq Warfa oo Paris uga qeybgalay shir weynaha mustaqbalka shaqada
February 5, 2020 admin304
Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Sadiq Xirsi Warfa ayaa ka qeybgalay shir weynaha mustaqbalka shaqada oo ka furmay magaalada Paris ee dalka Faransiiska, wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa shirka ku soo bandhigaya dadaallada xukuumadda Soomaaliya ee xal u helida shaqo la’aanta ka jirtay dalka .
“Wasaaradda aan hoggaamiyo wax ay dadal muuqda ku bixisay sannadkii tagay sidii loo heli lahaa fursado shaqo iyadoo aan ka duuleyno tirada ugu badan oo dadkeena ah dhallinyaro si ay u helan fursado shaqo oo ay kagag marmaan shaqo la’aanta soo wajahaday .” ayuu yiri Wasiir Sadiq.
Shir weynaha ayaa intii u socday waxaa diiradda lagu saaray sidii ay wadda shaqayn dhow u yeellan lahayeen shaqaalaha iyo maamulka ay hoostag si ay u yaraato ka war qab la’aanta xaaladda dadka ka shaqeeya xaruumaha dowladda.
dhanka kale Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, Mudane Sadiq Warfa ayaa la kulmay ra’iisul wasaaraha dalka Sweden, Stefan Lofven oo uu u gudbiyay sida ay dowladda Soomaaliya uga go’antahay wada-hadallada bulshada iyo xal u helida shaqada,iyadoo wadajir loo shaqeynayo. Wasiirka ayaa sidoo kale dowladda Sweden uga mahadceliyay taageerada ay siiso Soomaaliya.